Halista diyaaradihii Drone-ka ee lagu qabtay Muqdisho | Dalkaan.com
Home Warkii Halista diyaaradihii Drone-ka ee lagu qabtay Muqdisho
Halista diyaaradihii Drone-ka ee lagu qabtay Muqdisho
Muqdisho (dalkaan) – Taliye ku xigeenkii hore ee hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, Ismaaciil Daahir Cismaan ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyey diyaaradaha Drones-ka ah ee dhowaan lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Ismaaciil Daahir oo wareysi siiyey Universal Tv ayaa shaaca ka qaaday in diyaaradaha la qabtay aysan aheyn kuwa loo isticmaalo waraabinta beeraha, sida uu horey ugu dooday xildhibaan Zakariye Xaaji Maxamuud oo mas’uul ka ah shirkadda keentay diyaaradahaas.
Taliye ku xigeenkii hore ee NISA ayaa sheegay in diyaaradaha lasoo bandhigay uu culeyskooda yahay 38 kiilo garaam, isla-markaana aysan laheyn meel biyo iyo sun looga shubo.
“Malaha meel looga qaado ama looga raro biyo iyo sunta lagu buufiyo beeraha labadaba,” ayuu yiri Ismaacil Daahir oo ka jawaabayey hadalkii Xildhibaan Zakariye.
Waxa uu tilmaamay in sidoo kale diyaaradahan ay keenayaan saameyn amni iyo walaac xoogan, marka loo eego xilliga la keenay, maadaama dalka uu ku jiro xaalad kala guur ah.
“Waxay keeneysaa saameyn amni iyo walaac aad u tiro badan, sababtoo ah Drone-kan xildhibaan hore Zakariye waxa uu sheegay inuu isaga leeyahay, laakiin wax tafaasiil ah oo intaas dhaafsiisan oo uu bixiyey oo aan aheyn waxaan ku buufinaayaa beero iyo waxaan ka kireynayaa QM, si Ayaxa loola dagaalo ,” ayuu yiri taliye ku xigeenkii hore ee hay’ada NISA.
Sidoo kale wuxuu intaasi raaciyey “Waxay aheyd tafaasiil aan macno badan sameyneynin shakigana sii badisay. Xildhibaan Zakariye waxaa laga rabay inuu soo bandhigo macluumaadka uu ka haayo diyaaradahaas nooca ay yihiin iyo meesha laga soo iibiyey, si loo ogaado, loogana shaki baxo,”.
Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay Ismaaciil Daahir Cismaan taliye ku xigeenkii hore ee NISA in nooca diyaaradaha la qabtay ay yihiin kuwa ay sida aadka ah isticmaalaan kooxda ISIS iyo sidoo kale kooxda BKK ee ka dagaalanta Turkiga, sida uu hadalka u dhigay.
“Drones-kan lagu qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho ma’aha nooca beeraha loo isticmaalo, Dronada noocaan ah waa kuwo ay aad u isticmaalaan kooxda ISIS iyo Kooxda BKK ee la dagaalanta dowladda Turkiga,” ayuu markale yiri Ismaaciil Daahir Cismaan.
Diyaaradaha Drones-ka ee lagu qabtay garoonka Aadan Cadde oo gaaraya illaa lix diyaarad ayaa waxaa haatan baaritaano dheeraad ah ku haya saraakiisha NISA oo la wareegay.
Previous articleVideo: Soomaaliya ‘oo gashay xaalad la mid ah tii lagu dilay’ madaxweyne Cabdirashiid
Next articleMucaaradka Ethiopia ‘oo 40 km u jirsaday’ Addis Ababa
Somaliland oo olole ictiraaf raadin ah MAREYKANKA ka wada – Yaa...
Washington (Caasimada Online) – Mas’uuliyiin ka tirsan Somaliland oo maalmihii dambe ku sugnaa caasimada dalka Mareykanka ee Washington ayaa kulan la qaatay Safiirkii hore...
Liverpool oo Dhaawac kasoo gaaray Xidig kale oo Muhiim ah Ka...
Wararka Suuqa Caawa: Carlo Ancelotti oo Dhabarka Xijiyay Hazard, Liverpool oo...
Maxaa musharaxiinta ku qasbaya inay u diyaar garooban dagaal iyo badbaado...
Rudiger oo Qirtay in la Hakiyay Wada-hadalada Heshiis kordhinta ee Kooxda...
Farmaajo oo u baxaya safar dibadda ah + Ujeedka
Rayo Vallecano 1-0 Barcelona, Barca oo laga badiyay Xili uu Rigoore...
Xog: Mucaaradka oo diiday qorshe uu Farmaajo usoo jeediyey Talaadada